नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको अनसनको बलमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरेकोमा चर्को आलोचना गरेका छन् ।अनसनरत डा. गोविन्द केसीको काम नै अनसन बस्ने भएको र त्यसलाई नेपाली समाजले पचाइसकेको भन्दै उनले कांग्रेसले आन्दोलन गरेकोमा आक्रोश पोखे ।
आइतबार मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आफूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेर सहमति गरौं भनेको सुनाउँदै उनले भने, ‘उहाँले डा. केसीलाई सहमति गरे हुन्छ । नभए हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ भन्नुभयो ।’प्रचण्डले आफ्नो निष्कर्ष सुनाए, ‘यही बुद्धि हो भने कांग्रेस अब सिद्धियो । यो अवसानको बाटो हो ।’
जनताले बहुमत दिँदा समेत सरकार बनाउन फलामको च्यूरा सहज भएको उनले सम्भिmाए ।
डा. केसी अनसनलाई नेपाली समाजले पचाइसकेको उनले बताए । उनले भने, उहाँको काम अनसन बस्नु हो । वार्ता हुन्छ, सहमति हुन्छ । यो पनि सामान्य प्रक्रिया हो ।’प्रचण्डले डा. केसीलाई ककसको घेरामा परिसकेँ भन्ने हेर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
Posted on July 23, 2018 Author Categories Big News, फिचर न्युज, मुख्य समाचार, राजनीति
Previous Previous post: कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीद्धारा रजिष्टार सहित सबैको राजिनामा माग
Next Next post: सम्झनामा पुष्पलाल‘